9x चलचित्रहरु: तपाइँ नि: शुल्क तपाइँको मनपर्ने फिल्महरु हेर्न सक्नुहुन्छ - XperimentalHamid
9x चलचित्रहरू: तपाई नि: शुल्क आफ्नो मनपर्ने चलचित्र हेर्न सक्नुहुन्छ
अक्टोबर 27, 2020 by साशा गोहर
के सबैजनाले यस विषयमा फिल्म वा टेलिभिजन श्रृंखला हेर्छन्? किन छैन? चलचित्रहरू हेर्नु मनोरञ्जनकारी, रमाईलो र घडीको हातहरू चाँडै सार्ने अविश्वसनीय तरीका हो।
हुनसक्छ यही कारणले विश्वभरि हजारौं चलचित्रहरू रिलिज हुन्छन् र यी चलचित्रहरूले लाभका रूपमा अरबौं डलर उत्पन्न गर्छन्।
चलचित्रहरू, मानिस जस्तो, आफ्नै प्रकारका हुन्छन्। नाटक, सस्पेंस, डरावनी, रोमान्स छोटकरीमा, त्यहाँ दर्जनौं विधाहरू छन् जुन विशिष्ट जनसांख्यिकीलाई बाँकी भन्दा फरक स्वादको पूरा गर्दछ।
जसरी COVID-१ theले संसारभर भयावह विनाश गर्यो, मानिसहरुलाई उनीहरुका घरमा बन्दी बनाएर, अनलाइन चलचित्र साइटहरुको सदस्यता माथितिर देखीएको छ। ओटिपी साइटहरू जस्तै नेटफ्लिक्स, हुलु, अमेजन, इत्यादि, उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरू पहिलेभन्दा बढी व्यस्त भएको देखेको छ।
जहाँसम्म, त्यहाँ केहि वेबसाइटहरू छन् जुन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको मनपर्ने चलचित्रहरू मात्र हेर्न अनुमति दिन्छ, त्यो पनि कुनै बाधा बिना - यी वेबसाइटहरूको रोटी र माखन विज्ञापन बाहेक।
9x चलचित्र वेबसाइट सबै त्यस्तै हो: यसले नि: शुल्क सामग्री प्रदान गर्दछ, त्यहाँ चलचित्रहरूको एक विशाल संग्रह हो जुन तपाईले रोज्न सक्नुहुन्छ, र विधाको कुनै अभाव छैन।
यस लेखमा हामी9x चलचित्र र अधिकको बारेमा कुरा गर्ने छौं। त्यसो भए सुरू गरौं।
9x चलचित्र के हो?
9x चलचित्र बाँकी जस्तो वेबसाइट हो, यो बाहेक, तपाईंलाई एक साधारण क्लिकको साथ तपाईंको मनपर्ने चलचित्रहरूमा ट्यून गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
वेबसाइटबाट सजिलो बिभिन्न किसिमका चलचित्रहरू छन्: हिन्दीदेखि अ English्ग्रेजी, तमिलदेखि गुजराती सम्म, लगभग सबै भर्खरका चलचित्रहरू वेबसाइटका विकासकर्ताहरूले अपलोड गरेका छन्।
त्यस्ता वेबसाइटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सम्बन्धित विभागहरूबाट कल आएको छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क फिल्महरू हेर्न अनुमति दिन्छ। त्यसो गर्दा तिनीहरू यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् कि मानिसहरूले सिनेमाघरहरूमा फिल्महरू हेर्ने शुल्क वा केहि दिन।
अर्कोतर्फ, यो पनि औंल्याइएको छ कि x ०xmovies जस्ता वेबसाइटहरू पाइरेसीमा फस्टाउँछन् जुन विश्वका सबै देशहरूमा एउटा अपराध हो।
सबै प्रतिबन्ध जुन त्यहाँ राखिएको छ, त्यहाँ बाहिर एक तरीकाले यी वेबसाइटहरूमा फिल्महरू हेर्ने मानिसहरूका लागि हो - तिनीहरू बस आफ्नो VPN लागू गर्दछ आफ्नो पहिचान लुकाउनको लागि आफ्नो इन्टरनेट वाचडीगहरूको नदेख्ने आँखाबाट बच्न।
9x चलचित्र २०२० ले सामग्री र साथसाथ दर्शकहरूमा तीव्र वृद्धि देखेको छ, अधिकतर COVID-१ cases मामिलाहरूमा लगातार बढेको र आगामी लकडाउनको कारण।
9xmovies मा कसरी फिल्महरू हेर्ने?
X x चलचित्रका फिल्महरू हेर्नु केही अन्य समान वेबसाइटहरूमा समान छ।
एउटा चीज जुन प्रयोगकर्ताहरू अलमल्लमा पर्न सक्छन् तिनीहरूको मनपर्ने चलचित्रहरू खोजी गर्ने प्रक्रिया हो। ठीक छ, त्यहाँ एक मार्ग छ। तपाईं यसलाई खोजी पट्टीमा खोजी गर्न सक्नुहुनेछ, एउटा कुराको तपाईंले ख्याल राख्नु पर्छ, तथ्य यो हो कि यदि तपाईंले नाम गलत हिज्जे गर्नुभयो भने फिल्मले देखाउँदैन।
त्यो बाहेक, तपाईं पनि फिल्महरू फेला पार्न शैली फेला पार्न तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
Kooku वेब श्रृंखला अनलाइन 9xmovies
त्यहाँ अन्य धेरै छन् जसले यस वेबसाइटमा फिल्महरू मात्र हेर्छन् तर यसबाट डाउनलोड पनि गर्छन्। त्यस्तै गरी, एउटा नयाँ श्रृंखला 9xmovie साइटमा देखाईदै छ, नाम, Kooku वेब श्रृंखला 9xmovies।
यदि तपाईं यो श्रृंखला हेर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं केवल गुगल वा x ०० सिनेमा वेबसाइटमा खोजी गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ तपाईं अर्को लेख पढ्न सक्नुहुन्छ: चलचित्र 2020 मा उपलब्ध छ
9x चलचित्रहरू एक वेबसाइट हो जुन तपाईंलाई तपाईंको सबै मनपर्ने चलचित्रहरू प्रदान गर्न सक्दछ कि यो अ or्ग्रेजी हो वा हिन्दी तपाईं यो सबै पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं हिन्दी डबिंगमा अंग्रेजी चलचित्रहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
Kooku वेब सीरीज पनि एक लोकप्रिय श्रृंखला हो कि प्रशंसकहरूलाई एक हदसम्म अन्तर्देशीय बनाएको छ कि तिनीहरूले सन्देश धेरै टाढासम्म फैलाए। यदि तपाईं श्रृंखला हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं 9xmovies वेबसाइटमा त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ।
विभाग मनोरञ्जन, वेबसाइटहरू ट्याग 9x चलचित्र के हो
25,143 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्